Mapurisa Opomera VaChin'ono naVaNgarivhume Mhosva yeKuda Kukonzera Mhirizhonga
Chikunguru 20, 2020
Mapurisa emuHarare asunga mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe, VaJacob Ngarivhume nemutori wenhau VaHopewell Chin’ono.
Vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekukurudzira vanhu kuti varatidzire musi wa 31 Chikunguru.
Mutsamba kuvatori venhau, mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Paul Nyathi vati vaviri ava vasungwa vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo weCriminal Law Codification and Reform Act uye chikamu chezana nemakumi masere nemanomwe kana kuti Section 187 chebumbiro remutemo vachinzi vange vachikurudzira vanhu kuti varatidzire vachiita mhirizhonga.
VaNyathi vati vaviri ava vange vari kuHarare Central uye vachamiswa pamberi pedare munguva pfupi inotevera.
Mapurisa anonzi anga akapakatira pfuti asunga VaNgarivhume kumba kwavo mumusha weWaterfalls muno muHarare nhasi mangwanani pamberi pekuratidzira kwavakashevedzera kuti kuitwe munyika yose musi wa31 mwedzi uno pasi peboka ravari kudaidza kuti July 31stMovement.
Rimwe gweta raVaChin’ono rati mapurisa masere ange akapakatira pfuti apindawo zvine chisimba mumba mavaChin’ona kuChisipiti akaputsa magirazi ndokuvasunga.
VaChin’ono vanogara vachinyora padandemutande reTwitter neFacebook vachishoropodza nyaya dzehuori munyika pamwe nekutadza kufambisa basa zvakanaka kwavanoti kuri kuitwa zvinhu nehurumende.
VaNgarivhume vari kukurudzira kuti veruzhinji vapinde mumigwagwa vachiratidzira nenyaya yekusamira zvakanaka kwaita hupfumi hwenyika pamwe nehuori hwavanoti hwatekeshera muhurumende yaVaEmmerson Mnangagwa.
Nhengo yekomiti yepamusoro yeTransform Zimbabwe, VaRhoddi Takaruza, vaudza Studio 7 kuti havasi kufara nekusungwa kwaitwa VaNgarivhume vachiti kusungwa kwavo hakusi kuzotadzisa kuratidzira kwemusi wa31 Chikunguru.
Izvi zvatsinhirwa nemutungamiri weHashtag Tajamuka, VaPromise Mkwananzi, avo vati varikuenderera mberi negadziriro yekuratidzira kunyange hazvo VaNgarivhume vasungwa.
Mutungamiri wesangano rinorwira kodzero dzevatori venhau muZimbabwe reMedia Institute of Southern Africa, VaTabani Moyo, vati vashora kusungwa kwaVaChin’ono avo vavati vanga vakagariswa pamwechete VaNgarivhume kukamba yemapurisa yeHarare Central.
Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition, VaMarvelous Khumalo, vatsoropodza kusungwa kwaVaNgarivhume naVaChin’ono vachiti zvaitika izvi zvinoratidza kuti hurumende yaVaMnangagwa iri kuramba ichienderera mberi nekutyora kodzero dzeveruzhinji.
Zvichitevera kusungwa kwaVaChin’ono, muzinda weAmerica muHarare waburitsawo mashoko padandemutande reTwitter kuti wanga uchishushikana zvikuru nekusungwa kwavo.
Munyori mubazi rinoona nezvekuburitswa kwemashoko, VaNick Mangwana vaudza Studio 7 kuti havana chekutaura nezvenyaya iyi vachiti titaure naVaNyathi.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International rashorawo zvikuru kusungwa kwevaviri ava.
Varairidzi Vanoti Vave Kuda Kutaura naVaMnangagwa Sezvo Makurukota Avo Akundikana paNyaya yeMari
India Yorambidza Murairidzi weZimbabwe Cricket Anova Chizvarwa cheNyika Iyi Kuenda neChikwata Chake kuPakistan
Gurukota reManicaland Amai Gwaradzima Voramba Kuti Vakaita Huori paKuti VaPerrance Shiri Vape Mwana Wavo Purazi
Nyika Yogadzirira Kuparurwa kweBhajeti reGore Rinouya.